Ihlabathi lahlulwe langamacandelo amabini abantu ngokweRocha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Le mizekeliso ityhila iintlobo ezimbini zabantu ehlabathini
Zininzi iintlobo zabantu emhlabeni kunokuba zimbini kuphela. Ndiyithetha le nto phambi kokuba ndiqhubeke ndibhale okanye ndicazulule le mizekeliso eyahlula umhlaba ube ziindidi ezimbini zabantu. OkweReal Madrid okanye iBarcelona, ​​ekhohlo okanye ekunene, kunye neminye imizekelo oya kuyifumana ngezantsi njengabalandeli be-Android okanye abo beApple.
Ihlabathi egcwele amacandelo lawo ukusifumanela umsebenzisi okhetha uhlobo komnye umntu okhetha incwadi yakhe entsha ayithengileyo. Sinokudlulisa oku kuyilo kunye nabanye abasebenzisi abakhetha iMac yabo ngelixa abanye besiya kwi-PC ene-32GB ye-RAM kwaye andazi ukuba zingaphi ii-cores kwiprosesa. Olu luhlu lwemizekelo lusibeka phambi kweentlobo ezimbini zabantu, ke masiqhubeke.
Njengomdlalo, apho kukho imikhosi emibini echasayo, amandla A kunye nokunyanzela B, Impixano ivela kubo ukutsala umdla yoluntu njengoko kusenzeka ngale mizekeliso esibeka phambi kweentlobo ezimbini ezahlukeneyo zabantu.
Ingcamango enkulu ngokwayo bonisa umahluko phakathi komntu loo nto ayishiyi iqhekeza lale pizza, ngelixa elinye lingasithandi isonka esecaleni sokuyishiya ngaphandle kwamaxhala.
El icala elikhanyayo okanye elimnyama yamandla, indlela yokubeka i-mayonnaise kwi-hamburger okanye ngokulula ukubeka umqulu wephepha kwigumbi lokuhlambela yeminye yemizekelo eboniswe ngulo mzobi uRocha kwaye sele kunyaka ophelileyo wasungula olunye uthotho olufana kakhulu lokwahlula-hlula iintlobo zabantu.
Ngexesha Andikuthandi ukubiza abantu, kuba singaphezulu koku, ilizwe likhokelwe ukuba libekho ukusuka kwelinye icala okanye kwelinye, kungoko kuthotho olunobuchule kakhulu nolonwabisayo ukuhlekwa yile nto ingayo.
Unayo iTumblr yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Le mizekeliso ityhila iintlobo ezimbini zabantu ehlabathini
UMariana Retamal sitsho
Inomdla kakhulu into oyicebisayo. Ngokokubona kwam kukho into ebizwa ngokuba yi "common sense" kunye neekhonsepthi zobuhle nobukrakra, njalo njalo. ezisebenza ukusiqonda, kancinci, ubuncinci. Xa elowo nalowo efuna iplanethi ukuba ibe "yindlela endifuna ngayo," kuza isiphithiphithi esele sibonile ... Indalo ibe yeyokuqala ukuvukela: "sinyanzelwa", kungekudala kunangoku, ukuba "sisebenzise kwakhona "(ngokubeka umzekelo). Ubuninzi behlabathi kunye nokunyaniseka kwezinto eziphikisanayo kuyaphikisana kwaye kusikhokelela kwinqaba yaseBhabheli ukuba abazukulwana bethu (mhlawumbi abazukulwana) baya kuphila. Umbono kukuba ukhululeke okoko ungaphazamisi "okanye unenjongo yokucaphukisa abanye." Oko kunokubizwa ngokuba "kukuziphatha okuhle", "imbeko" njalo njalo. Ngethuba nje "singabantu" (senzelwe ixesha), asinakwenza into esiyifunayo: musa ukuhlonipha izibane ezibomvu, ukuxhuma kumgangatho we-10 (ngaphandle kokuzibulala), ukutya ihashe elibiweyo, njl. Umhlaba awuzange uqale ngenkulungwane yama-XNUMX, sisiphumo samawaka angaphambili.
Ndifundele ubugcisa kwaye ndonwabile ngokufanayo bonke ubomi bam. Ndiyabucaphukela ubugcisa ngenxa yeshishini kunye nokuzimela okuhamba nako.
"Ndixolele ubude bezimvo zam kodwa bendingenaxesha lokwenza isishwankathelo" hahaha.
Phendula uMariana Retamal
Enkosi ngokubhala! Into endingayithandiyo ziilebheli, kodwa sihlala kuluntu lwabathengi apho yonke into inelebhile. Kwaye kulapho singena khona.
Yinto yokuqala abantu abayenzayo xa bedibana nomntu abangamaziyo, ambhalele ukuba azole ngoba ngaloo ndlela abaphoswa ngubani kwaye uyaphi.
Ukutsha kumzekeliso wedijithali kaLucy He
UKent MacDonald utyhila ilizwe elingaphakathi elinemibala kwimifanekiso yakhe engaqondakaliyo